Ingqele eqengqelekileyo insimbi sheet sheet abavelisi - China Ingqele iqengqelekile insimbi sheet sheet mveliso, abaxhasi
I-316L luhlobo lwe-molybdenum ene-stainless steel. Ngenxa yomxholo we-molybdenum kwisinyithi, intsebenzo iyonke yentsimbi ingcono kunaleyo ye-310 kunye ne-304 ye-stainless steel. Ngaphantsi kweemeko zobushushu obuphezulu, xa uxinizelelo lwe-asidi ye-sulfuric ingaphantsi kwe-15% okanye ngaphezulu kwe-85%, i-316L intsimbi engenasici inoluhlu olubanzi. sebenzisa. I-316L insimbi engenasici nayo inokuchasana nokuhlaselwa kwe-chloride kwaye ke isetyenziswa rhoqo kwiindawo zaselwandle. I-316L insimbi engenasici inomxholo ophezulu wekhabhoni we-0.03 kwaye inokusetyenziswa kwizicelo apho ukufakelwa kungenzeki kwaye ukumelana nokubola okuphezulu kuyafuneka.